सजिलै गर्न सकिन्छ डिप्रेसनको उपचार | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य असार २८ २०७४ डा. प्रदीप पाण्डे न्युरोलोजिस्ट
आजकल धेरैले डिप्रेसनलाई ठूलो रोगको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । घरपरिवार, समाज आफन्तको डरले गर्दा पनि धेरै मानिस यसबारे खुलेर कुरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । डिप्रेसन समयमा नै पहिचान गर्न सके सजिलै उपचार पनि गर्न सकिन्छ । तर, सही समयमा उपचार भएन भने कहिलेकाहीँ यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । डिप्रेसन विभिन्न कारणले हुन सक्छ । कहिले हाम्रो आफ्नै कारणले हुन्छ भने कहिले बाहिरी कारणले पनि भइरहेको हुन्छ । मानिसलाई हुने डिप्रेसनका कारण र त्यसको उपचार गर्ने तरिकाबारे न्युरोलोजिस्ट डा. दीपेन्द्र पाण्डे यसो भन्छन् :